उद्योग « Clickmandu
हेटौँडा सिमेन्टले १ अर्ब ४० करोडको सिमेन्ट बेच्यो
काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौँडास्थित नेपाल सरकारको पूर्णस्वामित्वमा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कूल रु एक अर्ब ४० करोड ३३ लाख ९९ हजार ४४.१५
बाग्मती प्रदेशमा कार, जीप, भ्यान र माइक्रोबसले कति कर तिर्नुपर्छ ?
काठमाडौं । बाग्मती प्रदेशले ‘आर्थिक ऐन २०७८’ मार्फत् सवारीसाधनको वार्षिक कर ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत् कार, जीप, भ्यान र माइक्रोबसको कर बढाएको हो । प्रदेशले कार, जीप,
निजी क्षेत्रका कम्पनीले अर्बौ कमाउदा सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट किन सधैं घाटामा ?
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका सिमेन्ट कम्पनीहरुले वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ नाफा गर्दा पनि सरकारी सिमेन्ट कम्पनीहरु भने निरन्तर घाटामै छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइ सूचिकृत भएको कम्पनी शिवम् सिमेन्टको वार्षिक
अनुमति पाएसँगै शिवमले शुरु गर्यो ५३ ग्रेडको सिमेन्टको उत्पादन
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टले नेपालमा पहिलो पटक एनएस–५७२ अन्तर्गत ५३ ग्रेडको सिमेन्टको उत्पादन शुरु गरेको छ । नाप तौल विभागबाट अनुमति पाएसँगै कम्पनीले उत्पादन शुरु गरेको हो । शिवमले यसअघि
स्टार्टअपलाई पुरस्कृत गर्न उद्योग मन्त्रालयले माग्यो आवेदन
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप (नवप्रवर्तन) व्यवसायलाई सम्मानित गर्ने र केही लागत पुँजी पनि जुटाईदिने भन्दै आवेदन माग गरेको छ । नयाँ र फरक खालका व्यवसाय तथा
कोरोनाले केही व्यवसाय उठ्नै नसक्ने गरी धराशायी भए: साहिल अग्रवाल
कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित उद्योगहरुलाई अतिप्रभावित, मध्यमप्रभावित र कम प्रभावित भनेर क्षेत्रगत रुपमा पुनः परिभाषित गर्न जरुरी भएको छ । महामारीको दोस्रो लहरबाट गुज्रिरहँदा र कोभिडविरुद्धको खोप सबैले कहिलेसम्म पाउँछन भन्ने
चिया: उत्पादनमा मौसम, निकासीमा कोरोना झमेला
इलाम । विगतका वर्षमा यसपटक चियाको ‘सेकेण्ड फ्लस’ टिप्ने बेला हुन्थ्यो । चियाको मुनाकै राजा मानिने ‘फस्ट फ्लस’बाटै किसानले उल्लेखनीय आम्दानी बटुल्थे । यसपटक विगत झैँ भएन । चियाको पहिलो टिपाइ
अब अक्सिजन उद्योगमा प्रहरी सुरक्षा
काठमाडाैं । कोभिड-१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गइ अक्सिजनको अभाव हुन थालेपछि यसको उचित व्यवस्थापनमा सहज गर्न र दुरुपयोग रोक्न प्रहरीले अक्सिजन उद्योगमा निगरानी बढाउने भएको छ । गृह मन्त्रालयले ७७ वटै
प्रतिबद्धताको ३४ मात्र बैदेशिक लगानी भित्रियो, बढी बिदेशी लगानी भारतको
काठमाडौं । नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता अनुसार नआएको देखिएको छ । प्राप्त वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धतामा ३४.१ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले देखाएको छ । राष्ट्र बैंक अनुसन्धान
१५ अर्ब लगानीको सौैर्य सिमेन्टको क्लिङकर उत्पादन सुरु, एनएसपछि ओपीसी र पीपीसी उत्पादन हुने
काठमाडौं । तीनवटा व्यवसायिक घरानाको लागनी रहेको सौर्य सिमेन्टले व्यवसायिक उत्पादन सुरु गरेको छ । उदयपुरमा आफ्नै खानी रहेको सौर्य सिमेन्टले अहिले दैनिक ३ हजार मेट्रिक टन क्लिङकर उत्पादन गरिरहेको
गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई निःशुल्क विद्युत् दिनुपर्छः ऊर्जामन्त्री
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई विशेष सहुलियत दिने